Kismaayo News » Doorashada Somaliland biladayaha Geeska Afrika
Doorashada Somaliland biladayaha Geeska Afrika
Kn: Ayadoo la filaayo in maalinta Isniinta ay doorashada madaxweynenimada ka dhacdo Somaliland ayaa waxaa soo dhamaaday maalintii Jimcaha ahayd ololaha ay ku jireen musharixiin sadex ah oo ku loolamaysa hanashada hogaanka Somaliland.
Arinta xiisaha goonida leh ayaa ahayd 21 maalmood ee u danbeeyay sida quruxda badan ee nabadgaliyada, degenaanta iyo xasiloonida leh ee ay musharixiintu uga ololaynayeen magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, ayadoo musharax kastaayi dadka u sheegayay waxa uu qaban doono iyo waliba waxa ay tahay in asaga lagaga xusho labada musharax ee kale.
Musharax Muuse Biixi oo ku tartamaya magaca Xisbiga Kulmiye oo ah xisbiga hadeer haya talada Somaliland ayaa u muuqda mid gilgilayay labada musharax ee ku tartamaya xisbiyada mucaaradka. Faysal Cali Waraabe ayaa ku tartamaya magaca UCUD, halka Cabdidaxmaan Ciro uu ku tartamayo xisbiga WADANI. Dadka u diiwaan gashan inay codeeyaan ayaa gaaraya 700 000 waxaana qof kasta lamarin doonaa baaritaan casri ah oo dhanka indhaha ah, taasi oo loo adeegsan doono qalab lagu hubinaayo inuu yahay qofkii saxda ahaa ee kaarka codaynta qaatay iyo in kale ka hor inta uusan qofku codka ridin.
Kor joogeyaal heer caalami ah ayaa sheedda kala socon doona habka ay udhacayso doorashadu, waxayna Xisbiyadu balanqaadeen inay dhawrayaan daganaanta iyo xasiloonida si ay u ilaaliyaan muuqa wanaagsan ee dimuqraadiyada ka hanaqaaday Somaliland. Guud ahaan bisaylka siyaasadeed iyo kan shacbiyeed ee Somaliland ayaa u baahan in la bogaadiyo walow dadka qaarkii ay farta ku fiiqayaan in siyaasiyiinta qaarkood ay siyaasaddii qabiil iyo jifaysi u rogeen si ay dantooda ugu gaaraan, laakiin hadana waxaa la oron karaa hadii ay doorashadu ku dhamaato sansaanka nabadgaliyo ee ay ku soo idlaadeen ololihii xamaasadda iyo xiisaha lahaa, markaasi Somaliland waxay noqonaysaa biladayaha Geeska Afrika.